Levenana : (levina) a.: Fandevenana: Misaotra Tompoko, fa heni-boninahitra ny velona ary tsara levenana ny maty. • Ny zavatra rehetra enti-manana ny fandevenana ny olona maty. * F.-p.: Levenam-bola: vola notehirizin'ny olona taloha, izay nataony tao anaty vilany tany anaty tany. • h.i.: Soa natao izay tokony handraisam-baliny. / Mihady levenam-bola: mampahatsiahy ny soa vitan'ny tena na ny havan'ny tena mba hahafahana amin'ny sazy mety hahavoa ny tena noho ny heloka vite. Ahitsio